Somaliland oo xaqiijisay wada hadalada ay kula jirto Maamulka Khaatumo – STAR FM SOMALIA
Somaliland oo xaqiijisay wada hadalada ay kula jirto Maamulka Khaatumo
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cusmaan C/llaahi Saxar-diid ayaa xaqiijiyay wada hadalada ay kula jiraan maamulka Khaatumo ee uu hoggaamiyo Dr. Cali Khaliif Galeyr, isagoo caddeeyay in wada hadaladan ay yihiin kuwo bilow ah.
Mr Saxar-diid ayaa sheegay in Guddi isugu jira Wasiiro iyo madax dhaqameedyo uu Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo u magacaabay wada hadalada, waxaana uu tilmaamay in wada hadaladaas ay rajeynayaan inay miro dhal noqdaan.
“Waa wada hadalo rasmi ah oo Somaliland iyo Khaatumo u socda, dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa wada hadaladaas u saaray Guddi qaran oo Wasiiro iyo Madax dhaqameedyo isugu jira, waana soo dhoweyneynaa go’aanka Cali Khaliif”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Somaliland wada hadaladaas ku bilowday si daacadnimo ah, isagoo intaa ku daray inay ku rajo weyn yihiin in wada hadalada ay si fool ka fool ah uga dhacaan Hargeysa ama deegaanada uu ku sugan yahay Cali Khaliif.
“Waanu ku bogaadineynaa Cali Khaliif isaga iyo saaxibadii inay garteen in dad reer Somaliland yihiin, waligoodna ahaayeen, wada hadalada waa danta qaranka, danta Somaliland iyo Khaatumo ku jirto, waxaa la isugu imaan doonaa Hargeysa ama meel kasta ee la isla garto”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cusmaan Saxar-diid.
Madaxweynaha Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeyr ayaa xaqiijiyay inay socdaan wada hadalo u dhaxeeya maamulkiisa iyo Somaliland, isagoo caddeeyay in wada hadaladan ay yihiin kuwo la xiriira sidii dadka ku nool Sool iyo Sanaag ay nabad ku wada noolaan lahaayeen.
Si kastaba ha ahaatee markii wada hadalada ay soo shaac baxeen waxaa ka soo horjeestay Saraakiisha gacanta ku heysa ammaanka magaalada Buuhoodle, waxaana Taliyaha Booliska degmada Buuhoodle uu 12 saacadood u qabtay inuu uga baxo Dr. Cali Khaliif Galeyr oo ay ku eedeeyeen inuu Somaliland isu dhiibay.
Puntland oo guddi u xil saartay hubinta da’da Dhalinyarada Shabaabka ee dagaaladii Puntland lagu qabtay
Cabashada Ganacsatada Gobolka Banaadir ee Dekeda Muqdisho iyo culeyska ku soo kordhay